Doorashada Kuraas kamid ah Golaha Shacabka oo Maanta lagu qabtay Garoowe & Dhuusamareeb | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Doorashada Kuraas kamid ah Golaha Shacabka oo Maanta lagu qabtay Garoowe & Dhuusamareeb
Doorashada Kuraas kamid ah Golaha Shacabka oo Maanta lagu qabtay Garoowe & Dhuusamareeb
written by warsan radio 27/01/2022
Guddiyada hirgelinta doorashooyinka Dowlad Goboleedyada Galmudug iyo Puntland ayaa Maanta waxaa ay min Saddex Xubnood doorasbooda ku qabteen Magaalooyinka Dhuusamareeb & Garoowe ee Xarumaha Gobolada Nugaal iyo Galgaduud.
Maamulka Galmudug ayaa Magaalada Dhuusamareeb ku qabtay doorashada Afar kamid ah Kuraasta Golaha Shacabka, kuwaas oo ay kusoo baxeen Xildhibaano horay ugu fadhiyay iyo kuwo ku cusub Siyaasadda.
Kursiga koowaad ee doorashadii Maanta ka dhacday Magaalada Dhuusamareeb ee Hop 248 oo uu horay ugu fadhiyay Maxamed Axmed Abtidoon ayaa waxaa ku tartamay Saadaq Cumar Maxamed Saadaq (Jorn) iyo Cabdullaahi Xirsi Diirshe, waxaase kursiga ku guuleystay Saadaq Cumar Maxamed oo helay 81 Cod halka Cabdullaahi Xirsi Diirshe uu helay 17 Cod, waxaana halaabay laba Cod.
Kursiga Hop064 oo uu ku fadhiyay Sahra Cumar Maalin ayaa waxaa ku tartamay Maxamed Ibraahim Cali ( Maxamed Cajiib) iyo Cabdullaahi Iimaan Afrax, balse waxaa kursiga ku guuleystay Maxamed Ibraahim Cali ( Maxamed Cajiib) oo helay 98 cod halka Cabdullaahi Iimaan Afrax uu helay 2 cod.
Kursiga Saddexaad ee Hop096 oo uu ku fadhiyay Cabsi Casiis Cilmi Cali ayaa waxaa loo bedelay kursi Haween, waxaana Maanta ku tartamay Qaali Axmed Diiriye iyo Xakiimo Xersi Cali, balse waxaa Kursiga ku guuleystay Qaali Ahmed Diiriye kadib markii ay tanaasushay Xakiimo Xersi Cali, waxaana ergadu gacan taag ah ugu codeysay Qaali Ahmed Diiriye, iyada oo heshay 96, waxaa Maya ugu codeeyey 4, waxaa ka aamusay 1 qof.
Dhinaca kale Magaalada Garoowe waxaa Maanta lagu qabtay doorashada Afar kamid ah kuraasta Golaha Shacabka, kuwaas oo kala ah.
1: Hop128 oo uu ku fadhiyay Maxamed Cabdi Kaafi Maxamed , balse ay ku tartameen Maxamed Cabdiraxman Xayle iyo Maxamed Faarax Cali, waxaase ku guuleystay Maxamed Cabdiraxman Xayle oo helay 96 Cod iyo Maxamed faarax Cali oo helay 3 Cod, 1 Codna wuu halaabay.
2: Kursiga HOP223 oo uu ku fadhiyay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulle Jaabiri Wasiiru dowlaha Wasaaradda Waxbarashada Soomaaliya ayaa waxaa ku tartamay Xirsi jaamac Gaani iyo Siciid Maxamed Warsame, waxaana ku guulaystay Xirsi Jaamac Gaani oo ah Wasiiru dowlaha Wasaaradda Maaliyadda Jubbaland oo helay 93 Cod, halka Siciid Maxamed Warsame uu helay 3 Cod, 2 Codna way xumaatay.
3: Kursiga Hop232 oo uu horay uga fadhiyay Cabdirashiid Daahir Gaboobe ayaa waxaa Maanta ku tartamay Fardowso Cismaan Cigaal iyo Siciido Faarax Warsame, waxaana kursiga ku guuleystay Fardowso Cismaan Cigaal oo heshay 97 Cod, halka Siciido Faarax Warsame ay heshay 3 Cod.
4: Kursiga Hop144 oo uu ku fadhiyay Feysal Cabdulle Guuleed ayaa waxaa ku tartamay Cabdiqafaar Cilmi Xaange iyo Caasho Axmed Maxamed, waxaana ku guulaystay Cabdiqafaar Cilmi Xaange oo ah Wasiirka Qorsheynta Puntland, kaas oo helay 83 Cod halka Caasho Axmed Maxamed ay heshay 13 Cod, 4 Codna way xumaadeen.
Doorashada Soomaaliya ayaa haatan u muuqata mid si dardar leh ku socota, waxaana la filayaa in dowlad Goboleedyada kale ay ka bilaabato doorashada Golaha Shacabka.
Doorashada Kuraas kamid ah Golaha Shacabka oo Maanta lagu qabtay Garoowe & Dhuusamareeb was last modified: January 27th, 2022 by warsan radio
Guddiga xalinta khilaafaadka oo hakiyay natiijada kuraasta HOP211, HOP209 & HOP201
Daawo Vdeio AMISOM oo ku baaqday in Taageero Caalami ah Loo Fidiyo Ciidamada Xoogga Soomaaliyeed.